Vaovao farany an'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Raha efa manana Apple Watch ianao, dia namoaka ny fanavaozana rindrambaiko voalohany ny Cupertino
Rehefa afaka iray volana lasa izay, mpampiasa efa an-tapitrisany no efa mankafy ny azy ireo Apple Watch, ireo an'ny Cupertino dia nanao fanavaozana rindrambaiko misy hamahana olana sasany, ampiharina ny endri-javatra vaovao ary misy fiteny maro kokoa manohana.
Na dia notsapaina nandritra ny volana maro aza ny Apple Watch tao amin'ny laboratoara miafina an'ny orinasa, dia mbola misy fomba fampiasana vaovao mbola dinihina sy fakafakaina. safidy kajy kaloria vaovao amin'ny toe-javatra sasany na fampiharana ny mpanampy Siri ho an'ny hetsika hafa.
Araka ny efa natoronay, raha manana ny iray amin'ireo Apple Watch vaovao efa namidy ianao tany amin'ireo firenena sivy voalohany, io dia momba ny fotoana nanaovanao azy namakivaky ny lavaka hahafahanao mametraka ny fanavaozana ny rafitra voalohany, ny kinova 1.0.1.
Ireto misy antony mahatonga ny kinova vaovao an'ny rafitra dia ireto manaraka ireto:
Fanatsarana ny fahombiazan'ny:
Fantaro rehefa mijoro ny mpampiasa.
Kajy ny kaloria may nandritra ny fampihetseham-batana tamin'ny milina fivoy na bisikileta nijanona.
Kajy ny halavirana sy ny hafainganam-pandeha mandritra ny hazakazaka an-kalamanjana na hazakazaka an-tongotra.
Fangatahana antoko fahatelo.
Mifanaraka amin'ireo endri-tsoratra Emoji vaovao.
Hita amin'ny fiteny maro kokoa:
Mba hahafahana misintona ity fanavaozana vaovao ity amin'ny Apple Watch dia tsy maintsy hamarininao aloha fa manana ny farafaharatsiny farafahakeliny Batterie 50% ary miaraka amin'izay dia ampifandraiso amin'ny tambajotra elektrika amin'ny alàlan'ny tariby fampidirany ary manakaiky ny iPhone. Etsy ambany izahay dia mampiseho aminao ny sarin'ny mpiara-miasa aminay avy amin'ny Actualidad iPad izay ahafahanay mahita ny pikantsarin'ny iPhone.
Raha vantany vao voamarina io voalaza etsy ambony io dia tsy maintsy miditra amin'ny fampiharana Apple Watch amin'ny iPhone isika ary mitady ny fanavaozana. Tadidio fa, raha ny filazan'ny mpampiasa sasany izay efa nanao ny fizotrany, somary miadana ny fisintomana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Raha efa manana Apple Watch ianao, dia namoaka ny fanavaozana rindrambaiko voalohany ny Cupertino
Miseho ny seranan-tsambo ofisialin'i Apple ho an'ny iPhone 6 sy iPhone 6 plus
MacHub, manohy ny hubs ho an'ny MacBook vaovao izahay